SOM-Mid Ka Mid Ah Saraakiisha Al-shabaab Oo Eelaay Ah Oo Xalay La-Khaarijiyey & Sida Lagu Helay!!…Warbixin… | Allkisima.com
SOM-Mid Ka Mid Ah Saraakiisha Al-shabaab Oo Eelaay Ah Oo Xalay La-Khaarijiyey & Sida Lagu Helay!!…Warbixin…
Allkisima_Phot's-Amiir Al-shabaab Ka Tirsan Oo Xalay La Khaarijiyey-1-JPG.
Muqdisho:-(Allkisima)–Ciidamada DF-SOMALIA ayaa waxa ay xalay Magaalada Muqdisho ku dileen nin la sheegay in uu Amiir u ahaa Ururka Al Shabaab isla-markaana si qarsoodi ahna uga hawlgelaayay Magaalada Muqdisho.
Ciidamada Booliska iyo Nabad Suggida Gobolka Banaadir, ayaa saqdii dhexe ee xalay ku dhaqaaqay guri uu ninkaasi kaga sugnaa xaafadda Suuqa Xoolaha ee Degmada Huriwaa,waxaana Suura-gaashay in ay khaarijiyaan.
Ka hor inta aanay labada ciidan dilin ninkaasi, ayaa waxa ay ku amrayn in sharciga uu isu soo dhiibo, taasoo uu ku gacsn-seyray oo uu galay iska caabin iyo difaac.
Dhaanka kale xaalka ama sirtaan lagu helay eelaayga al-shabaab ka tirsan ayaa waxaa fududeeyey baa la-leeyahay Sarkaal dhawaan kasoo goostay Al-Shabaab oo magaciisa la shaacin,waxasna uu sheegay in ninka qorshaha ka fuliya xamar loogu yeero magaca markuu shabaabka la joogo Amiir Jacfar Kuukay .
Waxaana arrintaasi ay dhalisay in baaritaan iyo howgal ninkaas lagu soo qabanayo laga fuliyo xaafado ka tirsan Suuqa Xoolaha oo la Aamisan yahay inay Al-Shabaab aad ugu xooggan yihiin,ilaa iyo hadda.
Waxaa xusid mudan in weerarkaas uu ahaa mid qorsheysan oo si siman uga bilawday xaafado ku teedsan guriga uu deganaa amiirkaan oo ku yaalay agagaarka suuqa Daryeel ee ka tirsan Xaafadda Suuqa Xoolaha wuxuuna ag daganaa meel u dhaw Maxkamaddii ay Al-Shabaab ku lahaan jireyn halkaas markii ay ka talin jireyn.
Sidoo kale waxaa xusid mudan in Jacfar Kuukaay,ay dhawaan Al-Shabaab usoo magacaabeyn inuu noqdo amiirka u qaabilsan Xaafadda suuqa xoolaha markii la beddelay amiirkii hore, waxaana uu ahaa nin dhallinyaro ah oo halkaasi Al-shabaab uga fuliyey qorshooyin badan.
Sababta keentay inay Al-Shabaab ninkaan amiir uga dhigaan suuqa Xoolaha ayaa lagu sheegay inay tahay maadaama uu yahay nin aan halkaas si fiican looga aqoon isla markaasna dhawaan ka imaaday gobol.
Ugu dambeyntiina Sida ay inoo xaqiijiyeen dad si fiican u yaqaannay ninkaan, wuxuu kasoo jeedaa Koonfur Galbeed, gaar ahaan waa nin u dhashay beesha Mirifle, gaar ahaan Eelaay.